Bintangor Plywood, Pile Ego, Elu Pril, Ihe Nkiri Nkoputa - Edlon
Maka Onye nrụpụta
Akpụkpọ anụ Fancy-n'Ọnụ
Edlon Wood Products Co., Ltd. guzobere na 2003, nke dị n'etiti mpaghara akụ na ụba HuaiHai, nwee ọgaranya na akụrụngwa osisi na ndị ọrụ nwere nkà. Anyị na-elekwasị anya mgbe niile na osisi ihe ọkụkụ na-ewu ụlọ na ndozi arịa, ngwaahịa anyị ndị kacha ibu nwere MAKA PLYWOOD, FILM FACED PLYWOOD, DOORSKIN PLYWOOD na HPL PLYWOOD, ọtụtụ ụdị laminate osisi gụnyere PETG, ACYLIC, PVC, MELAMINE …… Anyị na-achụ iji ihe eji osisi eme ihe site na ogo nke mbu, anyị na - ewulite aha ọma ma dị ọcha EDLONWOOD, nke ahụ na - ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ ahịa na ụkpụrụ azụmahịa dị elu na ndị ahịa anyị niile bara uru.
Laminate panel bụ nhazi nke abụọ na ndabere nke plywood, na-ekpuchi elu ya na akwa nke ihe ndị ọzọ iji mezuo ebumnuche dị iche iche. Ugbu a, anyị nwere ike ịnye ihe dịka HPL, PVC, PETG, acrylic, Melamine, UV, wdg Enwere ike iji ya rụọ ụlọ dị elu, kọbọd, ụlọ ịsa ahụ, wdg.
Door plywood na-ezo aka plywood nke nha pụrụ iche eji eme ogwe ụzọ. Anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị iche iche nke agba, ụdị na usoro dịka ihe ndị ahịa chọrọ. N'otu aka ahụ, anyị na-azụlite ụdị ọhụụ dị iche iche, na inye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma bụ ebumnuche anyị.
Ogwe ihe eji eme ụlọ bụ plywood kachasị, nke a na-ejikarị eme ụlọ, dịka akwa, akwa akwụkwọ, wdg O nwere ezigbo ike na ewepụghị ọnụ, enwerekwa ngwaahịa pụrụ iche, LVL, ihe eji eme ihe ndina.
Ekwentị: 0086- (0) 516-66688198
Tags - Ngwaahịa dị ọkụ - Sitemap
Ọdịiche dị n'etiti plywood na bl ...
Nhọrọ arịa ụlọ, ch nke mbụ…
Melamine taịlị atụmatụ
Isi ihe na plywood